Puntland oo shacabka uga digtay halista duumada kuna baaqday in la iska baaro xanuunka sii fidaya – Radio Daljir
Puntland oo shacabka uga digtay halista duumada kuna baaqday in la iska baaro xanuunka sii fidaya
Diseembar 19, 2013 12:13 g 0
Boosaaso, December 19, 2013 – Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ka digtay xanuunka duumada, kaas ?oo soo ritay dad badan oo ku jira Cisbitaalada iyo goobaha caafimaadka kala gedisan ee deeganada Puntland.
Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cali Cabdulaahi Warsame oo booqday goobo caafimaad oo ku yaala Boosaaso ayaa booqashadiisa kadib waxaa uu degniin u jeediyey dadka reer Puntland.
Dr. Warsame ayaa ku baaqay in dadku is baaraan oo ay tagaan goobaha caafimaadka, xili xanuunka ay dad ugu dhinteen gobolka Bari halka dad kale oo badani ay iyana u jiifaan.
Wasaaradda caafimaadka waxay xaqiijisay inay xanuunka u geeryoodeen ilaa saddex ruux dhowrkii maalmood ee u dambeeyey gobolka Bari.
?goobtii caafimaad ee ugu yarayd ee aan shalay booqanay waxaa jiifay 10 qof oo xanuunka qaba, sidaas daraadeed wuu badan yahay xanuunku.? Ayuu yiri Dr. Cali Cabdulaahi
Deeganada Puntland waxaa xanuunka laga daaweeyey sanadkii hore ilaa 4 kun oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka oo ka hadashay halista iyo fiditaanka xanuunka oo haatan laga dareemayo gobolka.
Itoobiya oo weli baaraysa 5 qof oo ku eedaysan in ay ku lug leeyihiin weerar hore oo la fashiliyey
Kenya oo muwaadiniinteeda kala baxaysa koonfurta Suudaan xili qalalaasuhu ku sii kordhayo